Man United Oo Dhameystirtay Kooxaha U Soo Gudbay Wareega Sideeda Europa League Ka Dib Markii Ay San Siro Ku Garaaceen AC Milan | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMan United Oo Dhameystirtay Kooxaha U Soo Gudbay Wareega Sideeda Europa League Ka Dib Markii Ay San Siro Ku Garaaceen AC Milan
Man United Oo Dhameystirtay Kooxaha U Soo Gudbay Wareega Sideeda Europa League Ka Dib Markii Ay San Siro Ku Garaaceen AC Milan
March 19, 2021 Balaleti
Manchester United ayaa u soo gudubtay wareega sideed dhamaadka Europa League iyagoo caawa 1-0 kaga talaabsaday kooxda AC Milan oo marti loogu ahaa garoonka San Siro, iyagoo ku soo baxay wadar guul oo 2-1 ah madaama kulankii Old Trafford lagu soo kala baxay barbaro 1-1 ah.
Gool uu dhaliyay Paul Pogba oo ciyaarta bedel ku soo galay ayaa Manchester United u soo saaray wareega xiga ee Europa League iyagoo sugaya isku aadka la qaban doono berri oo Jimce ah haddii Eebe idmo.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro goolal la’aan ah iyadoo Manchester United ay ka maqneyd ciyaar dardar leh iyadoo AC Milan ay soo bandhigeysay ciyaar firfircooni ay ka muuqatay.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa bedel muhiim ah sameeyay bilowgii qeybta labaad isagoo soo geliyay Paul Pogba oo 10 kulan dhaawac ku maqnaa isagoo bedelay Marcus Rashford.
Seddex daqiiqo garoonka ma uusan ku jirin markii uu Paul Pogba hogaanka u dhiibay Manchester United isagoo ka faa’ideystay kubad weerar aheyd uu isagu bilaabay oo ay AC Milan iska bixin weysay iyadoo kubada ay u soo laabatay ka hor inta uusan shabaqa ku hubsanin.
Paul Pogba ayaa dhaliyay goolkiisii labaad ee abid isagoo bedel ugu soo galay Man United, wuxuuna bedel ku soo galay 31 kulan.
AC Milan ayaa iyadana bedel ku soo gelisay xiddigeeda weerarka Zlatan Ibrahimovic oo isna dhaawac ka soo laabtay daqiiqadii 65aad ee ciyaarta.
Henderson ayaa daqiiqadii 75aad wuxuu kubad gool loo fishay ka beeniyay Zlatan Ibrahimovic oo kubad madax ah oo halis aheyd goolka ku tuuray laakiin waxaa hal gacan ku bixiyay goolhayaha Man United.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay 1-0 oo ay Manchester United ku suuldaartay AC Milan iyagoo wadar ahaan ku soo baxay guul 2-1 ah.
Dhanka kale kooxda Steven Gerrard ee Rangers ayaa la reebay ka dib markii ay guuldarro 2-0 ka soo gaartay kooxda Slavia Parague iyadoo lugtii hore ay barbaro 1-1 ku soo dhamaatay.
Rangers waxaa la isgu daray guuldarro iyo labo casaan ah oo ay qateen kulankii caawa.
Villarreal ayaa iyadana u soo gudubtay wareega sideed dhamaadka iyagoo caawa 2-0 ku dubtay kooxda Dinamo Kiev, waxayna wadar ahaan ku soo baxeen guul 4-0 ah.
Ugu danbeyn Ajax ayaa iyadana guul weyn ku soo baxday markii ay caawa 2-0 ku dubteen kooxda Young Boys halka ay lugtii hore 3-0 ku soo badiyeen.